विश्व ११ र वेस्ट इन्डिज बिचको खेलमा कमेन्टेटरको लज्जास्पद हर्कत, फ्यानले गरे गालीको वर्षा
प्रकाशित मिति : June 1, 2018
एजेन्सी। हिजो राती भएको वेष्ट इण्डिज र विश्व ११ बीचको टि–२० खेलमा इङल्याण्डका पूर्वकप्तानको एक हर्कतले उनी क्रिकेट फ्यानको रिसको निशानामा परेका छन् । उनी यो खेलमा कमेन्ट्री गर्दै थिए । बाहिर बसेर कमेन्ट्री गरिरहेका नासिरले अचानक नियम तोड्दै निकै लाजमर्दो काम गरे ।
आइसीसीले यो खेललाई टि–२० अन्तर्राट्रियको मान्यता दिएको थियो । तर यसको बेवास्ता गर्दै नासिर कमेन्ट्री गर्दै माइक समातेर फिल्डभित्रै छिरे । यतिमात्र होइन उनी विकेटकिपरको छेउमै स्लिपसम्म पुगे । यतिबेला विश्व ११ का शाहिद आफरिदी बलिङ गर्दै थिए । नासिर यसरी मैदानमा छिरेपछि उनी क्रिकेट फ्यानको रिसमा परेका छन् ।
सामाजिक संजालमा उनको यो कार्यको तीब्र विरोध भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा यस्तो गर्नु क्रिकेटको नियम तोड्नु भएको भन्दै प्रशंशकले उनीमाथि कारवाहीको माग गरका छन् ।
विश्व–११ वेस्ट इन्डिजसँग पराजित
वेस्ट इन्डिजविरुद्धको मैत्रीपूर्ण ट्वेन्टी –२० क्रिकेटमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका १७ वर्षीय लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित विश्व–११ पराजित गरेको छ।
आइसीसीको आयोजनामा गएराति इङल्याण्डको लर्डसमा भएको खेलमा वेस्ट इन्डिजले विश्व–११ लाई ७२ रनले पराजित गरेको हो। जितका लागि वेष्ट इन्डिजले दिएको २ सय रनको लक्ष्य पछ्याएको विश्व–११ टिम १६.४ ओभरमा १२७ रनमै अलआउट भयो।
विश्व ११ का लागि श्रीलंकाका थिसरा परेराले सर्वाधिक ६१ रन जोडे। उनले ३७ बलमा ७ चौंका र ३ छक्का प्रहार गरे। त्यस्तै शोएब मलिकले १२, शहिद अफ्रिदले ११ र मिचेल म्याक्लीनाघानले १० रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो रनको स्कोर बनाउन सकेनन्।
नेपालका सन्दीप लामीछानेले ५ बलको सामना गर्दै ४ रनमा नटआउट रहे। विश्व–११ लाई सस्तैमा समेटन वेष्ट इन्डिजका केसरीक विलियम्सले ३, सामुएल बद्री र आन्द्रे रुसेलले दुई–दुई तथा किमो पाउल र कार्लोस ब्राथवेटले एक–एक विकेट लिए।
यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै १९९ रन जोडेको थियो। उसका लागि एविन लेविसले २६ बलमा ५ चौंका र ५ छक्काको मदतमा ५८, दिनेश राम्दीनले अविजित ४४, मार्लोन स्यामुएल्सले अविजित ४३, आन्द्रे रुसेलले २१ र क्रिस गेलले १८ रन जोडे।
बलिङतर्फ विश्व ११ का अफगानी बलर रसिद खानले २ तथा पाकिस्तानी शोएब मलिक र शहिद अफ्रिदले एक–एक विकेट लिएका थिए। नेपालका सन्दीपले भने १ ओभरमात्र बलिङ गर्दै १२ रन खर्चिए। उनले विकेट लिज भने सकेनन्। सन्दीपको एउटा बलमा मार्लोन स्यामुएल्सले छक्का प्रहार गरे भने अन्य बलले भने बाउन्ड्री पार गर्न सकेन्। विश्व–११ लाई शहिद अफ्रिदी र वेष्ट इन्डिजलाई कार्लोस ब्राथवेटले नेतृत्व गरेका थिए।
एकै हातले ब्याटिङ गर्ने अाएपछि तमिम ईकबालले जिते सबैको मन , कारण यस्तो
यी हुन् क्रिकेटर मेहन्द्रसिंह धोनीको बारे ८ रोचक तथ्य
क्रिकेटमा यस्तो पनि: ११ बलमा एक रन दिएर सात विकेट, यसरी उल्टियो खेल
यो आइपिएलमा बाउण्ड्रीबाट मात्र बने ११८४० रन, यी हुन् यस वर्षका १९ रोचक तथ्य
विश्वकै एकमात्र एकजना यस्तो व्यक्ति जसले फुटबल र क्रिकेट दुवैको विश्वकप खेले
घरेलु मैदानमा भुटानसँग नेपालको लज्जास्पद हार
ईपीएलमा भैरहवाको प्रशिक्षकमा पुबुदु
ओमानमा हुने टी–२० सिरिज ज्ञानेन्द्रले नखेल्ने
यू-१५ मा भुटानलाई पराजित गर्दै नेपाल फाइनलमाका लागि भारतसँग खेल्ने
सागको लागि प्रारम्भिक क्रिकेट टोली घोषणा
आइपिएलमा २० लाखमा अनुबन्धित सन्दीपको अबको मुल्य करोड बढी ! ( भिडियो सहित )
सन्दिपको टिमका खेलाडी बने ईमर्जिङ प्लेयर ! कसले जित्यो कार तथा अन्य पुरस्कार ? हेर्नुस्
आईपीएलको इमर्जिङ प्लेयरको भोटिङमा सन्दिप सबैभन्दा अगाडि
टी–२० क्रिकेटमा यी ब्याट्सम्यानको तुफानी दोहोरो शतक, ७१ बलमै २१४ रन बनाएर रचे इतिहास
सन्दीप विश्व क्रिकेटमाझ प्यारो बन्दै
मेरो क्रिकेट मिडिया प्रा.लि., काठमाडौँ
इमेल : info@merocricket.com
वेबसाईट : www.merocricket.com
© सर्वाधिकार सुरक्षित | मेरो क्रिकेट मिडिया प्रा.लि.